တျောလှနျရေးလုပျရနျ လှတျမွောကျနယျမွထေဲလို့ လာခငျြသော လူငယျတှေ သတိထားရမယျ့အခကျြ (၅)ခကျြ – စှယျစုံသုတ
တျောလှနျရေးလုပျရနျ လှတျမွောကျနယျမွထေဲလို့ လာခငျြသော လူငယျတှေ သတိထားရမယျ့အခကျြ (၅)ခကျြ ( ပထမအခကျြကတော့…… ကနျတော့ပါသေးရဲ့….ကိုယျ့‌‌ဖှားဖကျတျောကိုယျ အရငျတျောလှနျကွပါ…..)
၁။ ကိုယျ့xီးကိုယျ အရငျတျောလှနျကွပါ လှတျမွောကျနယျမွတှေမှော ပထမဆုံးတကျတဲ့ ပွဿနာက ဖုနျးကိစ်စပဲ…အမြားစုက လူငယျ‌တှေ ဖွဈတော့ ခဈြရေး ကွိုကျရေး ရှိကွတယျ .. အတျောမြားမြားက အဆငျပွတေယျ ခဈြ ရေ သဲရေ နဲ့ပွီးကွပမေဲ့ တခြို့က ဖုနျးကို နာရီပေါ ကျ အောငျ ပွော … စခနျးတှထေဲမှာ ဖွဈ ပြ ကျနသေမြှ အခွအေနေ‌တှေ အကုနျ သံတျောဦး ပွနျတငျနတောကွ အဆငျမပွဘေူး ….
လြှပျစဈကလညျး ရှားပါး … အဆိုးဆုံးက တောထဲ ရောကျပွီး သငျတနျး စခါမှ စျောက ပွနျချေါလို့ ပွနျခငျြတယျ ဆိုတာမြိုးပါ .. ယောကျြားတှတေနျမဲ့ စျောသတိရရငျ တငိုငို တရယျရယျ ဖွဈတကျတဲ့ ကောငျတှကေို အကွံပေးခငျြတာက ကိုယျ့xီးကိုယျ အရငျတျောလှနျကွပါ….
၂။ တျောလှနျရေး အလုပျလုပျနိုငျမှလာပါ အမြားစုက ‌စဈသငျတနျးကို ခရီးသှား ကုမ်ပဏီနဲ့ ခြိတျပွီးဘုရားဖူး ထှကျသလို လိုခငျြကွတယျ..ရောကျတာနဲ့ စားစရာ နစေရာ အသငျ့ ဒီနရေ့ောကျ နကျဖွနျ လကျထဲ သနေတျ အသငျ့ထညျ့‌ပေး၊ သငျတနျးပေး ဆိုတာမြိုး လိုခငျြကွတယျ .. ကနျြတဲ့ အလုပျ ငါတို့နဲ့…
မဆိုငျဆိုတာမြိုး သဘောထားခငျြကွတယျ…တောထဲမယျ နရောဒသေပျေါ မူတညျလို့ အစာရစော အပွငျ တဲ အိမျသာ စတာ‌တှေ ဆောကျ ဖို့ ဓနိ သကျကယျ ဝါး စတာ‌တှေ ထမျးတငျရနိုငျပါတယျ … အ‌ခွအေနေ ပျေါမူတညျပွီး ထငျးရှာ ရထေမျး ပေါငျးရှငျး အကုနျလုပျရပါတယျ …
၃။ သိပျလူရာ မဝငျခငျြပါနဲ့ အမြားစုက နိုငျငံရေး သိပ်ပံကို လနေဲ့ဝမျးသာ မ ကှဲတာ.. ပှငျ့လငျး မွငျသာမှု ခေါငျး စဉျအောကျကနေ ရှိသမြှ သတငျးအခကျြ အလကျ အကုနျသိခငျြကွတယျ…မပွောပွရငျ စခနျးတာဝနျခံတှကေို ပ ဒီးပဒါးတှေ မကွားတကွား ပွောတာမြိုး လုပျခငျြကွတယျ..
ကြုပျတို့က‌တော့ သငျတနျးပွီးမယျ့ရကျနဲ့ ပွနျရမယျ့ရကျကို ကနြေပျနပျ မကနြေပျနပျ ပွောလမေ့ရှိဘူး … ပွောရငျ ဆရာသမား အမြားစုက နောကျက စျောတှေ မိသားစု ဒီးပဒါးတှေ မကွားတကွား ပွောတာမြိုး လုပျခငျြကွတယျ..
ကြုပျတို့က‌တော့ သငျတနျးပွီးမယျ့ရကျနဲ့ ပွနျရမယျ့ရကျကို ကနြေပျနပျ မကနြေပျနပျ ပွောလမေ့ရှိဘူး …ပွောရငျ ဆရာသမား အမြားစုက နောကျက စျောတှေ မိသား စု တှကေို ပွနျပွောကွတယျ .. နောကျဆကျတှဲက ဒလနျလုပျတာ မဟုတျဘဲ သတငျး ပေါ ကျရငျ နယျမွေ အခွအေနတှေေ ရှုပျထှေးလာရော .
တကယျ ရှုပျထှေးလာလို့ စဈကွောငျး ခြီလာပွီဆို ညကွီး မိုးထဲ ရထေဲ စဈကွောငျးကို မို ငျးနဲ့သှားဆငျးစောငျ့ရတာက သ န တျလေး ပ ဈ တကျရုံ သာမနျ ဗုံးလေး လုပျတကျရုံနဲ့ သှားလို့ရတာမဟုတျဘူး .
ဒီတော့ အာခြောငျမှုကွောငျ့ နောကျက EAO တှနေဲ့ စခနျး တာဝနျခံတှဟော အခနျ့မသငျ့ အသကျနဲ့ ရငျးပွီး စောကျလုပျရှုပျရတယျ … ရကျအတိအကနြဲ့ လုပျခငျြရငျ တောထဲမလာဘဲ တရား စခနျး သှားတာ .. ပနျးထိုးနညျးသငျတနျး တကျတာတှကေ ပိုအဆငျပွမေယျ..
၄။ သောကျဆံကို အသှား အပွနျစရိတျတော့ လောကျအောငျ ယူခဲ့ကွပါ.. ကုနျးတတနျ ရတေတနျ အဆငျ့ဆငျ့ ဖွ တျပွီးမှ ရောကျတဲ့နရောတှဆေီကို အိမျက ဘာလခြောငျကွျောလေးနဲ့ ပိုကျဆံ နှဈသောငျးလောကျပို့ပေးခငျြလို့ သှားယူပေးစမျးပါ ဆိုတာမြိုး မခြိုးပါနဲ့ ..
အကုနျရှိတာနဲ့စားရပါတယျ … တောထဲရောကျလို့ နှဈရကျမှ မပွညျ့ခငျ ဒ ဏျ မခံနိုငျလို့ ပွနျခငျြတာ ငမျး ငမျးတကျ…မေးတော့ အပွနျလမျးစရိတျတောငျ တဝကျပွညျ့အောငျမရှိဘူး ဆို တော့ ကနျြတဲ့ လူတှကေို သပျသပျ လာဒုက်ခ ပေးနသေလိုပဲ …
၅။ တကယျ အကွ မျးခံနိုငျမှလာပါ သငျတနျးဆိုရာမှာက ရကျတို သ န တျ ပ ဈ သငျတနျးလောကျကနစေပွီး သငျတနျးသားခငျြး နှဈဖှဲ့ခှဲ တို ကျ မိ ရငျ ဆယျငါး မိနဈလောကျ ပါး ရို ကျ ရေ နှ ဈ ကုနျကုနျ ပွောရရငျ ဘောမှေးပါ မီးရှို့ နှိ ပျ စ ကျပွီး မငျးအဖေ နာမညျ ဘယျ သူလဲ အမနောမညျ ဘယျသူလဲထိ အစမျး စဈမေးတဲ့ သငျတနျးတှေ အထိရှိပါတယျ …
အမှနျဖွမေိရငျ ကိုယျ့အဖှဲ့ထဲ ပွနျရောကျတဲ့ အခါ ပိုနာပါတယျ ..အဲ့မှာ တကယျ မလုပျနိုငျဘဲ ကြုပျတို့ က ဟိုသငျတနျးမှ တကျခငျြတာတို့ ဒီသငျတနျး ထဲထညျ့ပေးပါတို့ အာမခြောငျပါနဲ့ .. ကြုပျတို့က လပေေါတှေ တှဖေူ့းလို့ ရိုးနပေါပွီ ..
တော်လှန်ရေးလုပ်ရန် လွတ်မြောက်နယ်မြေထဲလို့ လာချင်သော လူငယ်တွေ သတိထားရမယ့်အချက် (၅)ချက် ( ပထမအချက်ကတော့…… ကန်တော့ပါသေးရဲ့….ကိုယ့်‌‌ဖွားဖက်တော်ကိုယ် အရင်တော်လှန်ကြပါ…..)
၁။ ကိုယ့်xီးကိုယ် အရင်တော်လှန်ကြပါ လွတ်မြောက်နယ်မြေတွေမှာ ပထမဆုံးတက်တဲ့ ပြဿနာက ဖုန်းကိစ္စပဲ…အများစုက လူငယ်‌တွေ ဖြစ်တော့ ချစ်ရေး ကြိုက်ရေး ရှိကြတယ် .. အတော်များများက အဆင်ပြေတယ် ချစ် ရေ သဲရေ နဲ့ပြီးကြပေမဲ့ တချို့က ဖုန်းကို နာရီပေါ က် အောင် ပြော … စခန်းတွေထဲမှာ ဖြစ် ပျ က်နေသမျှ အခြေအနေ‌တွေ အကုန် သံတော်ဦး ပြန်တင်နေတာကြ အဆင်မပြေဘူး ….
လျှပ်စစ်ကလည်း ရှားပါး … အဆိုးဆုံးက တောထဲ ရောက်ပြီး သင်တန်း စခါမှ စော်က ပြန်ခေါ်လို့ ပြန်ချင်တယ် ဆိုတာမျိုးပါ .. ယောက်ျားတွေတန်မဲ့ စော်သတိရရင် တငိုငို တရယ်ရယ် ဖြစ်တက်တဲ့ ကောင်တွေကို အကြံပေးချင်တာက ကိုယ့်xီးကိုယ် အရင်တော်လှန်ကြပါ….
၂။ တော်လှန်ရေး အလုပ်လုပ်နိုင်မှလာပါ အများစုက ‌စစ်သင်တန်းကို ခရီးသွား ကုမ္ပဏီနဲ့ ချိတ်ပြီးဘုရားဖူး ထွက်သလို လိုချင်ကြတယ်..ရောက်တာနဲ့ စားစရာ နေစရာ အသင့် ဒီနေ့ရောက် နက်ဖြန် လက်ထဲ သေနတ် အသင့်ထည့်‌ပေး၊ သင်တန်းပေး ဆိုတာမျိုး လိုချင်ကြတယ် .. ကျန်တဲ့ အလုပ် ငါတို့နဲ့…
မဆိုင်ဆိုတာမျိုး သဘောထားချင်ကြတယ်…တောထဲမယ် နေရာဒေသပေါ် မူတည်လို့ အစာရေစာ အပြင် တဲ အိမ်သာ စတာ‌တွေ ဆောက် ဖို့ ဓနိ သက်ကယ် ဝါး စတာ‌တွေ ထမ်းတင်ရနိုင်ပါတယ် … အ‌ခြေအနေ ပေါ်မူတည်ပြီး ထင်းရှာ ရေထမ်း ပေါင်းရှင်း အကုန်လုပ်ရပါတယ် …
၃။ သိပ်လူရာ မဝင်ချင်ပါနဲ့ အများစုက နိုင်ငံရေး သိပ္ပံကို လေနဲ့ဝမ်းသာ မ ကွဲတာ.. ပွင့်လင်း မြင်သာမှု ခေါင်း စဉ်အောက်ကနေ ရှိသမျှ သတင်းအချက် အလက် အကုန်သိချင်ကြတယ်…မပြောပြရင် စခန်းတာဝန်ခံတွေကို ပ ဒီးပဒါးတွေ မကြားတကြား ပြောတာမျိုး လုပ်ချင်ကြတယ်..
ကျုပ်တို့က‌တော့ သင်တန်းပြီးမယ့်ရက်နဲ့ ပြန်ရမယ့်ရက်ကို ကျေနပ်နပ် မကျေနပ်နပ် ပြောလေ့မရှိဘူး … ပြောရင် ဆရာသမား အများစုက နောက်က စော်တွေ မိသားစု ဒီးပဒါးတွေ မကြားတကြား ပြောတာမျိုး လုပ်ချင်ကြတယ်..
ကျုပ်တို့က‌တော့ သင်တန်းပြီးမယ့်ရက်နဲ့ ပြန်ရမယ့်ရက်ကို ကျေနပ်နပ် မကျေနပ်နပ် ပြောလေ့မရှိဘူး …ပြောရင် ဆရာသမား အများစုက နောက်က စော်တွေ မိသား စု တွေကို ပြန်ပြောကြတယ် .. နောက်ဆက်တွဲက ဒလန်လုပ်တာ မဟုတ်ဘဲ သတင်း ပေါ က်ရင် နယ်မြေ အခြေအနေတွေ ရှုပ်ထွေးလာရော ..
တကယ် ရှုပ်ထွေးလာလို့ စစ်ကြောင်း ချီလာပြီဆို ညကြီး မိုးထဲ ရေထဲ စစ်ကြောင်းကို မို င်းနဲ့သွားဆင်းစောင့်ရတာက သ န တ်လေး ပ စ် တက်ရုံ သာမန် ဗုံးလေး လုပ်တက်ရုံနဲ့ သွားလို့ရတာမဟုတ်ဘူး ..
ဒီတော့ အာချောင်မှုကြောင့် နောက်က EAO တွေနဲ့ စခန်း တာဝန်ခံတွေဟာ အခန့်မသင့် အသက်နဲ့ ရင်းပြီး စောက်လုပ်ရှုပ်ရတယ် … ရက်အတိအကျနဲ့ လုပ်ချင်ရင် တောထဲမလာဘဲ တရား စခန်း သွားတာ .. ပန်းထိုးနည်းသင်တန်း တက်တာတွေက ပိုအဆင်ပြေမယ်..
၄။ သောက်ဆံကို အသွား အပြန်စရိတ်တော့ လောက်အောင် ယူခဲ့ကြပါ.. ကုန်းတတန် ရေတတန် အဆင့်ဆင့် ဖြ တ်ပြီးမှ ရောက်တဲ့နေရာတွေဆီကို အိမ်က ဘာလချောင်ကြော်လေးနဲ့ ပိုက်ဆံ နှစ်သောင်းလောက်ပို့ပေးချင်လို့ သွားယူပေးစမ်းပါ ဆိုတာမျိုး မချိုးပါနဲ့ ..
အကုန်ရှိတာနဲ့စားရပါတယ် … တောထဲရောက်လို့ နှစ်ရက်မှ မပြည့်ခင် ဒ ဏ် မခံနိုင်လို့ ပြန်ချင်တာ ငမ်း ငမ်းတက်…မေးတော့ အပြန်လမ်းစရိတ်တောင် တဝက်ပြည့်အောင်မရှိဘူး ဆို တော့ ကျန်တဲ့ လူတွေကို သပ်သပ် လာဒုက္ခ ပေးနေသလိုပဲ …
၅။ တကယ် အကြ မ်းခံနိုင်မှလာပါ သင်တန်းဆိုရာမှာက ရက်တို သ န တ် ပ စ် သင်တန်းလောက်ကနေစပြီး သင်တန်းသားချင်း နှစ်ဖွဲ့ခွဲ တို က် မိ ရင် ဆယ်ငါး မိနစ်လောက် ပါး ရို က် ရေ နှ စ် ကုန်ကုန် ပြောရရင် ဘောမွေးပါ မီးရှို့နှိ ပ် စ က်ပြီး မင်းအဖေ နာမည် ဘယ် သူလဲ အမေနာမည် ဘယ်သူလဲထိ အစမ်း စစ်မေးတဲ့ သင်တန်းတွေ အထိရှိပါတယ် …
အမှန်ဖြေမိရင် ကိုယ့်အဖွဲ့ထဲ ပြန်ရောက်တဲ့ အခါ ပိုနာပါတယ် ..အဲ့မှာ တကယ် မလုပ်နိုင်ဘဲ ကျုပ်တို့ က ဟိုသင်တန်းမှ တက်ချင်တာတို့ ဒီသင်တန်း ထဲထည့်ပေးပါတို့ အာမချောင်ပါနဲ့ .. ကျုပ်တို့က လေပေါတွေ တွေ့ဖူးလို့ ရိုးနေပါပြီ ..